Mari Isiri yeBepa Yonetsa Kuwana muZimbabwe
Ndira 27, 2011
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanoti hurumende yeAmerica yavanyorera tsamba ichivazivisa kuti yagadzirira kutengesa mari yayo isiri yebepa kuZimbabwe, kuitira kuti munyika muwane mari yechenji iri kunetsa kuwana.
VaBiti vanoti kuti nyika iwane mari iyi, inofanira kuti iitenge kuhurumende yeAmerica. Asi vayambira kuti nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyika inogona kukanganisa nhaurirano nehurumende yeAmerica.
Izvi zvinotevera kushaikwa kwemari diki idzi munyika izvo zvava kupa kuti vemabhizimisi vamanikidze vanhu kuti vatenge zviwitsi nezvimwe zvinhu senzira yekuvapa chenji kana vatenga zvinhu.
Vanhu vari kugunun’unawo kuti kana mari diki dzichimbowanikwa, vemabhizimisi vari kudziramba. VaJohn Mushayavanhu, nhengo yeBankers Association, vanoti vakawana mari yakawanda yesirivha kubva kuSouth Africa, asi vemabhizimisi vakairamba zvakapa kuti vagume vaidzosera havo.
Mukuru wePeakford Management Consultancy, VAlbert Mandizvidza vanowirirana nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi, uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaGodfrey Kanyenze, kuti munyika mune dambudziko remari iyi, asi nyaya yacho inofanirwa kubatwa nehungwaru kuitira kuti pasave zvakare nekunetsekana panyaya yemari.